साम्राज्ञीको क्रेजको परिक्षा ! « Mazzako Online
साम्राज्ञीको क्रेजको परिक्षा !
नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह को क्रेज कुनै चलेको नायक भन्दा कम छैन ।उनलाई चलचित्र बोक्न सक्ने र निर्माताको लगानी सुरक्षित राख्न सक्ने नायिकाको रूपमा लिइन्छ । त्यसो त उनले लिने पारिश्रमिक पनि महङै छ। उनी नेपालकी महङ्गी नायिका हुन् । डेब्यु फिल्म ड्रिम्स बाट नै सफलता पाएकी साम्राज्ञी चुजी छिन् र राम्रो ब्यानरको फिल्ममा मात्रै काम गर्छिन् ।
उनका फिल्म दर्शकका लागि प्रतिक्षित हुन्छन् । साम्राज्ञीको यस वर्ष २ फिल्म रिलिज हुदैछन् : मारूनी र रातो टिका निधारमा । दुवै फिल्ममा उनको सशक्त भूमिका छ र यिनै फिल्मबाट उनले आफ्नो स्टारडम जोगाउनु पर्ने छ सँगै निर्माताको लगानी पनि उनले उठाईदिनु पर्ने छ । तर यस पटक साम्राज्ञीलाई सजिलो भने पक्कै छैन ।
मारूनी सँग हिट फिल्म कब्बडीको दोस्रो सिक्वेल कब्बडी ३ पनि लाग्दै छ । कब्बडी ३ धेरैले प्रतिक्षा गरेको चलचित्र हो र यसको मल्टी स्टार काष्टले पनि प्रतिक्षित बनिरहेको छ । त्यसैले मारूनीको रिलिज र व्यापारलाई यसले असर पक्कै गर्न सक्छ ।
साम्राज्ञीको मारूनी चलेन या रूचाईएन भने र कब्बडी ३ लाई दर्शकले रूचाए भने साम्राज्ञीको बढ्दो क्रेज पक्कै सेलाउछ र उनमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निर्माताले सोच्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले साम्राज्ञीलाई चल्नै पर्ने दबाब छ । उनको मारूनी चलेन भने त्यसको असर रातो टिका निधारमा लाई पनि पर्नेछ ।